Otu esi etinye ma jiri Gdu Disk User Analyzer na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
July 13, 2021 July 13, 2021 by Jọshụa James
Ịwụnye Gdu Disk ojiji Analyzer
Nhọrọ nwụnye ọzọ – Snap
Wepu Gdu Disk ojiji Analyzer
Wepu nwụnye Snap:
Wepu nwụnye Archive:
Otu esi eji GDU Disk User Analyzer
GDU Disk ojiji Analyzer bụ ihe nyocha ojiji diski eserese maka GNOME. Ọ bụ akụkụ nke gnome-utils mana kewara maka GNOME 3.4. Aha mbụ ya bụ Baobab n'aha osisi Adansonia. Akụrụngwa ahụ na-enye onye ọrụ ihe ngosi menu, eserese eserese nke ihe dị na draịvụ diski. GDU sitere n'ike mmụọ nsọ godu, dua, nkp, na df na e bu n'obi ya bụ maka diski SSD ka ọ were nhazi n'ụzọ zuru oke. Agbanyeghị, HDD na-arụkwa ọrụ nke ọma, mana uru arụmọrụ abụghị nnukwu.
Na njedebe nke ntuziaka a, ị ga-ama Otu esi etinye Gdu Disk Usage Analyzer na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị Sistemụ arụmọrụ na ntuziaka na-esonụ. Otu ụkpụrụ ahụ ga-arụ ọrụ maka ụdị ọhụrụ Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo).
Ọ bụrụ na ịnweghị wget arụnyere, wụnye ya ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ nbudata ebe nchekwa isi mmalite:
Iji budata GDU Disk Analyzer, ịkwesịrị ịga na ibe nbudata gọọmentị ha wee nweta njikọ iji budata ya na ọdụ Ubuntu gị. Ozugbo emechara, mebie iwu a:
Mara, njikọ a na-arụ ọrụ, ma ị nwere ike ịgafe ịga na ibe nbudata. Ọ bụrụ n'ọdịniihu ọ gbajiri, gaa na ibe nbudata ka ị nweta njikọ emelitere.
Ozugbo ebudatara ya, ịkwesịrị ịwepụ ihe ndekọ ahụ ugbu a ka ịga n'ihu na nrụnye.
Ugbu a, ị ga-emezu iwu a ka ịdepụta faịlụ gị niile nwere ikike ugbu a:
Ị ga-achọpụta na faịlụ ahụ (gdu_linux_amd64) kwesịrị ịbụ na ndabara executable mgbe ị wepụrụ Archive. Ọ bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ ọ bụghị, wee mebie iwu a iji mee ka faịlụ ahụ nwee ike ịme ya:
Ọzọ, bugharịa faịlụ ewepụtara na /usr/bin/ directory.
Iji nyochaa ụdịdị yana iji nyochaa nrụnye, ị nwere ike mebe iwu a:
Iji chekwaa oge, ụzọ dị ngwa bụ ịwụnye GDU Disk Use Analyzer site na iji snap. Snaps abụghị maka onye ọ bụla, ọtụtụ ndị enweghịkwa mmasị na ha, n'ihi etuto na ihere ha na-ebu n'etiti sysadmins na ndị ọrụ ike dị elu. N'agbanyeghị nke a, nhọrọ a bụ nke a na-anabata kpamkpam maka ndị ọrụ nkezi yana ọ nwere ike ịdị mfe idobe mmelite n'ọdịnihu.
Iji wụnye snap, mebie iwu a:
Iji tinye ngwanro a na ngwa nrụnye snap, tinye iwu a:
Mara, ọ dị mma maka ịmebe iwu ndị a ma ọ bụrụ na ị na-eche mperi ihu site na nrụnye snap. Ịmalite iwu ndị a agaghị emerụ gị ahụ ọ bụrụgodị na ị naghị eche nsogbu ọ bụla ihu.
Ka e were ya na ị ga-achọ iwepụ ngwanro akụrụngwa diski n'ọdịnihu. Enwere ike ime nke a site na iwu ndị a:
Ugbu a ị tinyela GDU, oge eruola ka ịmụta ka esi eji ụfọdụ iwu ndị a na-ahụkarị. Ntuziaka ga-agafe ụfọdụ isi.
Nke mbụ, ịpụ na GDU GUI, ị nwere ike mebie iwu ndị a:
Ka ịchọta enyemaka na ozi ndị ọzọ, pịnye iwu a:
Mgbe etinyeghị arụmụka na iwu GDU, akụrụngwa diski ga-enyocha ndekọ ndekọ ugbu a. Iji mee nke a, tinye iwu a:
Ị nwekwara ike iji ụzọ faịlụ mee otu iwu ahụ. Ọmụmaatụ:
Lelee ole diski a na-eji yana ọnụọgụ ohere efu dị maka diski niile agbagoro:
Iji gosi nha ndekọ aha naanị, mebie iwu a:
Ị nwere ike ịnyagharịa folda site na iji nke gị (Elu, ala, banye) igodo ịhọrọ na tinye nchekwa. Ilaghachi azụ ma ọ bụ ọbụna gaa n'ihu dị ka ihe ọzọ ( Tinye), ị nwere ike iji (ekpe na aka nri) akụ na ahụigodo gị.
Akụkụ ọzọ mgbe ị na-agagharị na nchekwa, ị nwere ike ihichapụ folda. Ihe atụ n'okpuru
Nke mbụ, weta ihe ọ bụla GDU GUI interface, wee gaa na iji keyboard gị na faịlụ ma ọ bụ nchekwa, dịka ọmụmaatụ:
Na-esote, na ihe atụ anyị, ntuziaka ga-ehichapụ (test.log) dị ka n'okpuru na-eji (D) iwu na njedebe:
Ozugbo ịhọrọla faịlụ ịchọrọ ihichapụ, pịnye:
Ị ga-enweta mmapụta GUI ndị a, na-eji nke gị (ỤRỤ) igodo ka ịnyagharịa, mana ugbu a, tinye ee.
Dabere na ikike nke faịlụ ma ọ bụ ndekọ, ị nwere ike nweta mperi ikike dị ka n'okpuru:
Ọ bụrụ na ị naghị amasị agba mara mma ma na-ahọrọ oji na ọcha ụlọ akwụkwọ ochie, ị nwere ike mezuo iwu GDU dị ka ndị a:
Iji (-c) na-emepụta GUI mmepụta na oji na ọcha, ọmụmaatụ n'okpuru:
Ihe atụ mmepụta GUI:
Ị mụtala otu esi etinye GDU Disk Usage Analyzer wee mụta otu esi ewepụ ma jiri iwu ndị dị na ntuziaka ahụ. N'ozuzu, GDU na-arụ ọrụ dị mfe mara mma na ịlele diski na GUI dị ọcha. Akụrụngwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ ka mma, mana ọ bụrụ na ịchọrọ idobe ihe dị mfe ma dị mfe, nke a bụ ụzọ dị mma iji mezuo ebumnuche gị n'ịchọpụta ma ohere zuru ezu dị maka ịgba ọsọ na ịwụnye ngwa ngwanrọ ọhụrụ na ihichapụ faịlụ na nchekwa ndị na-adịghị arụ ọrụ.
A na-edobe ma na-emelite ngwanro a mgbe niile. M ga-adụ ọdụ ka ị ghara ịwụnye GDU site na njikwa ngwugwu ọ bụla dabara adaba na ebe nchekwa ọ bụla n'ihi na ha niile na-ada azụ na ikekwe enweghị nchebe.
Otu esi etinye, Hazie Tripwire IDS na Debian 10